Wednesday March 31, 2021 - 17:37:26 in Wararka by Xarunta Dhexe
Wasaaradda Caafimaadka Jarmalka waxay diiwaangelisay 31 xaaladood oo xinjiro dhiig ah oo ka mid ah dadka lagu tallaalay tallaalka AstraZeneca ee ka dhanka ah Corona. Sida ku cad warbixin Aftonbladet uu ka soo xigtay wargeyska Jarmalka ka soo baxa ee
19 ka mid ah 31-ka xaaladood, dadku waxay ku yeesheen waxyeelo la xiriirta dhiig xinjirowga, 9 kiis ayaana u dhintay dhacdadan.
29-ka qof ee wax yeelada ka soo gaadhay waxay ahaayeen haween da’doodu u dhaxayso 20 ilaa 63 sano. Dhanka kale, waxaa ku jira labo nin, oo da’doodu kala tahay 36 iyo 57.
Talaalkan oo ay soo saartay shirkada iswiidhishka-ingiriiska ee AstraZeneca, ayaa waxaa ka taagnaa muran baahsan kadib markii ay soo bexeen warar sheegaya tiro kooban oo dadka la talaalay ah oo ay la soo darsaan waxyeelo daran Dhowr waddan oo ay Sweden ku jirto ayaa joojiyay tallaalka.
Hay’ada caafimaadka bulshada Sweden ayaa dhawaan shaacisay in dib loo bilaabayo talaalka dadka ka weyn 65 sano. Hay’addu waxay warbixinteeda hore ku tiri, "Wax saameyn ah lagama helin dadka la tallaalay ee ka weyn da’da 65 sano. Waxaa la filayaa in waxtarka uu ka badnaan doono halista dadkan.